Mareykanka Oo Qirtay Inay Dad Rayid Ah Ay Ku Dhinteen Duqeymo Uu Ka Fuliyey Soomaaliya | Himilo Media Group
Washington, 07 Apr, 2019 (Himilo)-Mareykanka ayaa labadii sano ee la soo dhaafay wuxuu Soomaaliya ka fuliyey 110 duqeymo dhinaca cirka ah
Mareykanka ayaa qirtay duqeymo ay bisha April Soomaaliya ka fuliyeen diyaaradahiisa aan duuliyaha lahayn inay ku dhinteen dumar iyo carruur.
Waa marki ugu horreysay oo uu Mareykanku qirto iney duqeymaha diyaaradihiisa ay fuliyeen ay ku dhinteen dad rayid ah tan iyo marka uu Soomaaliya ka billaabay duqeymaha dhinaca cirka ah.
Toddobaad ayaa ka soo wareegtay xilliga uu Mareykanka uu ku gacan seydhay eedeymaha ay u soo jeedisay hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International iyada oo sheegtay shan duqeymood oo kala duwan uu Mareykanka ka fuliyey iney ku dhinteen 15 qof oo rayid ah.
Duqeymaha dhinaca cirka ee ka dhanka ah Ururka al-Shabaab oo uu Mareykanka ka fuliyo Soomaaliya ayuu ka bilaabay 2011-kii xilliga uu dalka Mareykanka uu Madaxweyne ka ahaa Barack Obama.
Inta xilka loo doortay Madaxweyne Donald Trump waxa sii laba jibbaarmay weerarrada uu Mareykanka Soomaaliya ka fuliyo.
Mareykankana mar sii horreysey wuxuu sheegay weerrada uu ka fuliyey Soomaaliya inuu ku dilay 800 oo ka mid ah dagaallamayaasha ururka al-Shabaab, wuxuuna ku adkeystay in aaney jirin dad rayid ah oo weeraraadaasi wax ku noqday.
Balse shir jaraa’id oo ay jimcihi qabteen Saraakiil ka tirsan ciidammada Mareykanka ayey ku sheegeen in baadhitaan gudaha ah ay billaabeen kaddib marki ay hay’adda Amnesty ay warbixin ku saabsan duqeymaha ay soo gaadhsiisay aqalka congreskana uu wax ka weydiiyey.
Madaxa Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika ku sugan Aficom General Thomas Waldhauser, ayaa amar ku bixiyey in baadhitaan arrimahaasi ku saabsan la sameeyo gaar ahaanna dadka rayidka ah ee la sheegay iney duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyey Soomaaliya ay ku waxyeelloobeen.